१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड - Pradesh Today
Homebreaking-news१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड
१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड
आव ०७७/७८ बजेट…
काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड रूपैयाँको बजेट पेश गरेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि भने सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब रूपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ उठाउने उनले जानकारी दिए ।
जसमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ खर्च विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त बजेट बिहीबार प्रस्तुत गरेका हुन । यो बजेट स्वास्थ्य, रोजागरी र कृषिमा जोड दिइएको छ ।
प्रदेशमा पुरानै योजना
बजेटमा प्रदेश ५ का केही नयाँ र अधिकांश पुरानै योजनाहरू समावेश भएका छन् । प्रदेश राजधानीमा २ सय ५० आइसीयु बेडसहितको अस्पताल बनाउने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेश राजधानीमै ५० बेडका महामारी अस्पताल बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सबै प्रदेश राजधानीमा उच्चस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरिने अर्थमन्त्रीले डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ । वृहत् दाङ सिचाईं, भेरी बबई, रानीजमरा बर्दिया सिचाईं आयोजनालाई अघि बढाउने योजना छ ।
राप्तीमा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम निरन्तरता दिइएको छ । दाङको प्रगन्ना, बड्कापथ योजनाको निरन्तरता गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
नवलपरासीको धौवादीको फलाम खानीमा जाने सडक निर्माण गरिने भएको छ । त्यस्तै नेपालगञ्ज र भैरहवाको सीमा क्षेत्रमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गरिने भएको छ ।
बुटवल मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट छुट्याइएको छ । यो योजना चालु आर्थिक वर्षदेखि शुरू भएको हो ।
बृहत्तर लुम्बिनी गुरूयोजना, रामग्राम गुरूयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । यी दुबै गुरूयोजना हालै बनाइएको हो । लुम्बिनीको ५ हजार क्षमताको ध्यान सभाहल निर्माण पूरा गर्न बजेट बिनियोजन भएको छ ।
तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचिमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । नौमुरे जलविद्युतको लगानी ढाँचा निर्माण गरी प्रक्रिया अगाडी बढाइने छ ।
बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । रूकुम पूर्वको सदरमुकाम पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरिएको खतिवडाले जानकारी गराए ।
बर्दिया, दाङमा बाढी पहिरोमा घरबार गुमाएकालाई सुरक्षित आवास कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याइएको छ । बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
घोराही–मुसिकोट, पोखरा–रिडी सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गसहितका तीन सडकलाई स्तरोन्नति गर्न ५ अर्ब विनियोजन भएको छ ।
बुटवल–कोहलपुरसहितका क्षेत्रमा विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण र अध्ययनका लागि आठ अर्ब बढी रकम विनियोजन गरिएको खतिवडाले बताए ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन र टर्मिनल भवन निर्माणमा बजेट राखिएको छ । नेपालगञ्ज विमानस्थलमा टर्मिनल भवन निर्माण र दाङको नारायणपुरमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्न बजेट छुट्याइएको छ । बाँकेमा निर्माणाधिन कारागार आगामी वर्ष सकिने भएको छ ।
बढ्यो स्वास्थ्य बजेट
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिँदै सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेका छन । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९० अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
कोरोनाभाइरसले निम्त्याएको नयाँ परिस्थितिले सिर्जना गरेको नयाँ चुनौती सामना गर्नेमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित भएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी वर्षको बजेट विगतका आर्थिक वर्षहरूमा विनियोजन गरिने स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटभन्दा झण्डै २२ अर्ब बढी रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ६८ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको थियो ।
संक्रामक रोग र विपद्बाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने बजेटको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कोरोनाबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गहन जिम्मेवारी भएको बताएका छन् ।
उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कोरोना परिक्षणको दायरा बढाउने, औषधी उपचारको ब्यवस्था गर्न क्वारेन्टाइनको ब्यवस्था तथा मुलुकभर भरपर्दो उपचार सेवा व्यवस्था गर्न छ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।
कोरोनालगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार गरिने भएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, स्तरोन्नति र स्वास्थ्य जनशक्ति विकासमा जोड दिइएको छ ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । कोरोना महामारीमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।
कोरोनालगायत अन्य संक्रामक रोगविरूद्ध कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीको लागि ५ लाख बराबरको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शैंयासम्मको छुट्टै सरूवारोग अस्पताल निर्माण, काठमाडौं उपत्यका र प्रदेशमा रहेका सरकारी अस्पतालमा थप २ सय ५० शैंयाका आइसीयु बेड अस्पताल स्थापना गरिने छ ।
सातवटै प्रदेशका राजधानीमा ५० शैंयाको सरूवा रोग अस्पताल निर्माण गरिने भएको छ । पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेलधुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै लगिने भएको छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न लागि स्थानीयस्तरमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिने भएको छ ।
सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैंयासम्मका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न आगामी वर्ष थप २ सय ७२ अस्पताल स्थाना गर्न १४ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थाको शुरूवात गरिने भएको छ । स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोगको जाँचसहितको व्यवस्थाको लागि ५ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
तीन वर्षभित्र सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बिमा गर्ने गरिने छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।